PP Plastiki Hollow Sheet, PP Plastiki Hollow Roll, Plastiki Inotakura Mabhokisi - Inomhanya
Mhepo Inodzokera Sheet
Bvunzo dze ESD
Chinwiwa & mvura yemumabhodhoro
Plastiki dhaireti pad
R & D Kudzora
OEM Service Yakagoverwa Dhizaini Yakapiwa
Shandong Runping Plastic Co, Ltd ndeimwe yepamusoro-tech fekitori yePP hollow sheet (roll) uye Plastiki ekutakura mabhokisi ane ISO 9001: 2008 & RoHs kusimbiswa muWeifang guta, shandong mudunhu.
Inonzwika insulation uye kupisa kupisa
Nekuda kwechimiro cheplastic hollow sheet, kupisa kwaro nemagadziro ekutapira kwemazwi zvakadzikira kwazvo kupfuura izvo zve sheet solid. Iyo ine yakanaka kupisa kufukidza uye yakanakisa insulation zvinogoneka.
Chekutanga ndechekuti mutengo wezviputi zvepurasitiki zvakaderera pane zvimwe zvinhu. Ichachengetedza zvikuru mutengo wakawanda panguva yekutenga zvinhu zvakaomeswa kune zvigadzirwa zvakapera.
Zvakasikwa zvine ushamwari
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti zvakatipoteredza-zvine hushamwari zvigadzirwa zvinonyanya kunetseka pasi rese. PP hollow sheet haina-chepfu uye isina-kusvibisa, uye inogona kugadzirwazve nekushandiswa zvakare kugadzira zvimwe zvigadzirwa zvepurasitiki.
Isu tinotarisira kuve nehutano hwakanaka hwekuvandudza bhizinesi nemutengi wese! Tigashire kushanyira fekitori yedu!
Shandong Runping Plastic Co, Ltd ndeimwe yepamusoro-tech fekitori yePP hollow sheet (roll) uye Plastiki ekutakura mabhokisi ane ISO 9001: 2008 & RoHs kusimbiswa muWeifang guta, shandong mudunhu. Kambani yedu ine 11 epamberi epurasitiki hollow bhodhi kugadzira mitsara uye 3 mashopu, egore kugadzirwa kugona kune yakakwira mhando yepurasitiki hollow board inosvika dzinenge 10000Ton. Tine ISO 9001: Chitupa che2008 uye RoHs certification.Tinopa maawa makumi maviri nesere mushure mekutengesa-service.Munogona kutifonera chero nguva (86-13355279991) kana kuti titumire tsamba.; mutengi! Tigashire kushanyira fekitori yedu!
Batanidza: www.rpplast.cn chemagic.com
Nyaya dzinofanirwa kucherechedzwa pakutenga epurasitiki hollow board
Kuiswa muchidimbu kwepurasitiki hollow board
China hofisi: NO.13887, indasitiri nzvimbo weifang, shandong, China
Usa hofisi: yakanakisa twinwall plastiki kero: 8605 santa monica blvd # 79525 kumadokero hollywood california 90069-4109 usa
Tera: 0086 13355279991